Ubunjineli |Jiangxi Rayone Wheels Technology Company Limited
IGUMBI LOKUBONISA AMAvili
ukuqhubela phambili kwitekhnoloji
Emva kweminyaka yophando kunye nophuhliso, iRayone Wheels inebhongo ngokuba yenye yeTop 10 mveliso yamavili e-China ukuvelisa amavili atyhidiweyo kunye nenkohliso ngaphakathi kwendlu.Ikomkhulu eFuzhou, kwiPhondo laseJiangxi, iRayone's state-of-the-art, indawo eqinisekisiweyo ye-JWL&VIA inoluhlu olubanzi loomatshini abatsha kraca.
I-Rayone Wheel isebenzisa oomatshini abatsha be-CNC abali-12 ukwenza amavili.Kwaye oomatshini bokungqusha abanokuqina okuphezulu kunye nezantya zokusonta banciphisa amaxesha okujikeleza kwaye bavelise ukugqiba okugudileyo.Sinokwenza iinkqubo ezahlukeneyo eziyinkimbinkimbi ezifana nokujika, ubuso bomatshini, umlomo wokusika idayimane, ifestile yokugaya kunye nephethini ye-bolt njl.
Isebe leeNgqungquthela zezandla
Isebe loLungiso lwezandla linoxanduva lokulungisa ivili ukuze ligqibe umphezulu walo wokugqibela.Amavili aneentsimbi ezibrashiweyo okanye ezipholishiweyo afumana isixa esongezelelweyo solungiselelo lwezandla, esenza inkangeleko yobugcisa enokuvela kuphela kwisandla esifundileyo.
Olunye lolona thotho lwethu lubalaseleyo ukuza kuthi ga ngoku.Uthotho lwe-DIM luzisa umva isimbo sevili sakudala esiya kuba sisihle kwi-motorsport, ukuma, okanye ukujonga ukukhukuliseka.
Amaziko emveliso kaRayone aquka uluhlu lweendlela zokugqiba ezifana nokupholisha ngeceramic, ukuxukuxa ngesandla kunye nomgubo wokugquma.Ukugqitywa kwe-20 yesiko ekhoyo kunye nokugqitywa kwe-undercut ebomvu / eluhlaza okwesibhakabhaka, ukugqitywa kwe-hyper kunye nokugqitywa kweBronze, iRayone inolawulo olupheleleyo kwimveliso egqityiweyo, iqinisekisa umgangatho okhethekileyo kunye nokuchaneka kwivili ngalinye elishiya umzi-mveliso.
Ngemotorsport engqondweni, i620B ibuyisa imvakalelo yeLifa leMveli ngeendlela zoyilo lwangoku.Ibonelelwe ngokobukhulu obahlukeneyo kunye neepateni zebholiti iCR1 ikwagquma ukuhambelana kwe "Big Brake".
Iifektri ezininzi ze-alloy wheels zisebenzisa ezona ndlela zilula kunye nezona zixhaphakileyo zobuchwephesha ukunyusa umthamo wemveliso.Amavili eRayone, ngakumbi uthotho loMdyarho weRayone, aluyekeleli kwiimpawu zalo ezikhethekileyo nezintsonkothileyo zokwenza lula.
Amavili eRayone aneemold ezingaphezu kwama-800 ze iconic kunye nenkonzo yokuvula umngundo.Vula i-mold idinga iintsuku ze-30 kwaye ngokuqhelekileyo inkqubo yoyilo iqala ngokuchonga injongo yokugqibela.Izikhewu kuzo zombini iimveliso zethu kunye nemarike zinceda ukukhokela indlela yoyilo olutsha.Sizama ukubona into engekhoyo kwaye sigcwalise izikhewu ukusuka apho, ngokuqhelekileyo siqala ngemodeli ye-3D.
Idayimani yokusika uMlebe
Idayimane yokusika ubuso inqaku lamavili esitya esinzulu, ebandakanya ubuhle obulula kunye nokusulungeka koyilo.Ngaphandle kokuchaneka kakhulu kuyo yonke inkqubo yokwenziwa, ukugqiba kwesipili esifana neso ebusweni bevili akunakunakwenzeka.
I-Aesthetics elungiselelwe isithuthi
Yonke imoto eyenziwe kunye nemodeli ineeparamitha ezahlukeneyo kunye nokukhutshwa kunye nobuhle obahlukeneyo ngokubanzi.Ukusebenzisa inkqubo yethu yokulinganisa ebanzi kunye nobuNjineli beSithuthi esiLungelelweyo, amavili eRayone alungiselelwe ngokukodwa isithuthi ngasinye, ukwandisa ukugoba kunye nokugqibelela ukufaneleka ngokupheleleyo.
I-Rayone yi-Top 10 ye-alloy wheels factory e-China, ine-brand ye-3 yamavili, i-Rayone Wheels, i-DIM Wheels kunye ne-KS Wheels, ziyaziwa kakhulu e-Asia naseYurophu.Sineemodeli ezingama-800 kwikhathalogu yethu, siphinde sigcine i-15,000pcs kwindawo yethu yokugcina iimpahla rhoqo ngenyanga kubo bonke abathengi baphesheya abakhetha kuzo.
Rayone Racing Wheels Show Room
Uluhlu lweRayone Racing lugubungela i-13-24 intshi yamavili oyilo lwasemva kwe-market, ukusuka kuyilo lwe-mesh yakudala ukuya kwi-iconic ye-icon-spoke design, amavili eRayone uzibophelele kuphuhliso kunye noyilo lwezitayile ezitsha, ngokwe-avareji, i-15-20 yeendlela ezahlukeneyo zamavili. ziya kusungulwa minyaka le.
DIM Amavili Bonisa Rom
Ukuba ubona ibhokisi ye-DIM ebomvu nemnyama kwimarike yamavili nakweliphi na ilizwe, ngokungathandabuzekiyo iphuma kuthotho lwe-rayone yeDIM.Uthotho lwe-DIM ludume kakhulu e-Asia naseMzantsi Melika, kwaye ngaphezu kwe-20 yabathengisi abatsha basebenzisa iibhokisi zethu ze-DIM zamavili kwiinyanga nganye.
Igumbi lokubonisa iivili le-KS
Uchungechunge lwe-KS okwangoku lufumaneka kwiimodeli ezi-8, ezimele izitayela ezahlukeneyo kunye nexesha.Uthotho lwe-KS luluhlu olutsha kraca oluyilwe ngentsebenziswano nenkampani yamavili yaseJapan, banomsebenzi ophezulu kunye namandla evili aphezulu kunomgangatho waseJapan weJWL, kule mihla i-KS iyathandwa eYurophu naseOstreliya, kwaye yenze ukuchaphaza kwirali yaseOstreliya. .
Ukulungelelaniswa okuchanekileyo kuphunyezwa ngokuthatha imilinganiselo kwiindawo ezingaphezu kwe-100 ezahlukeneyo zedatha ejikeleze imoto.Loo milinganiselo ikhokelela kwiimodeli ze-CAD ezivavanywa kusetyenziswa uHlalutyilo lwe-Finite Element (FEA) ukuze kuqinisekiswe ukuthotyelwa kwe-JWL kunye ne-VIA ngelixa ukwandisa i-concavity.Ivili ngalinye lenziwe ngokukodwa kwisithuthi ngasinye kunye nemodeli.
Lonke uyilo lwevili lweRayone luvavanywa ngokwasemzimbeni ngokuthobela imigangatho yeJWL kunye neVIA.Ukusebenzisa iFinite Element Analysis (FEA) isoftwe ivili ngalinye lifumana ikona efanisiweyo, iradial, kunye novavanyo lwempembelelo ethile kwisithuthi.
Imilinganiselo engaphezulu kwe-100 iqokelelwa kwisithuthi ngasinye, kubandakanywa ukureyithwa kobunzima kunye nokuhanjiswa, ukumisela eyona mfuno yemathiriyeli yevili ngalinye.Ngokukodwa kwi-Precision Series, i-center drop, i-hub, kunye nokunyuka kwee-diameters eziphakamileyo zithe ngqo kwipatheni ye-bolt yesithuthi, okuvumela ukunciphisa ubunzima.
Ubunjineli besithuthi sikaRayone siqinisekisa ukuba isithuthi sakho siya kufumana isitayile saso kunye nokusebenza kwaso.Ivili ngalinye le-Precision Series lenziwe ukuba libe phezulu kunevili le-OEM elitshintshayo kwaye ukulungeleka kokugqibela kuphunyezwa ngokuqwalasela ububanzi obukhulu, i-offset, kunye ne-concavity ukuba imilinganiselo yemoto iya kuvumela.
Umthamo wenyanga wemveliso yamavili eRayone ufikelela kumaqhekeza angama-100,000, kunye nemigca yemveliso eyi-10 iyonke.Zonke iivili zihamba kwi-workshop yokulinganisa eguquguqukayo, i-workshop ye-X-ray, i-workshop enzima, i-workshop yokugqiba, kunye nesebe lokupeyinta, igumbi lokuvavanya impembelelo, kwaye ekugqibeleni kwisebe le-QC, apho bavavanywa kwaye bafanelekile ngaphambi kokuba bathengiswe phesheya.
Ukuvelisa awona mavili abalaseleyo kushishino kuqala kungekho nto ngaphandle kweyona mathiriyeli ikrwada igqwesileyo, eyenziwe eTshayina.Amavili eRayone Racing zenziwe nge-aluminiyam yomgangatho ophezulu we-A356.2 kuyilo lwevili lobunikazi.Ubushushu bunyangwa ngemfezeko eyongeziweyo, la mavili omdyarho alingana kwaye ngamanye amaxesha angaphezulu kwemathiriyeli ekrwada esetyenziswa ziinkampani eziphezulu zehlabathi zeOEM.
Kwesi sigaba semveliso uyilo lwevili luyavezwa ngelixa oomatshini be-CNC besusa kancinci njenge-0.02” yemathiriyeli yokupasa ukuze bafezekise eyona nto ichanekileyo.Uluhlu lwezinto ezikhethekileyo kunye nezintsonkothileyo ezisikiweyo zibonisa uthotho oluchanekileyo, ngelixa olunye uthotho lweRayone luneenkcukacha ezifanayo ezichazwe kulo lonke.
Ukwenza ngokwezifiso ngokupheleleyo
I-Rayone Wheels isekela ukulungelelaniswa okupheleleyo, okufana ne-PCD ngokwezifiso, i-ET ngokwezifiso, i-CB ngokwezifiso, kunye neenkonzo zenkqubo yokwenza umbala, ukubhala kunye nokwenziwa kwelogo, ubuninzi be-odolo yethu buncinci be-120 kwi-design nganye, kwaye ixesha lokuvelisa malunga neentsuku ze-40.
Ivili ngalinye leRayone liphantsi kwenkqubo yokulawula umgangatho ngokucokisekileyo ukusuka ekugalweni ukuya ekugqityweni kwaye liphumelele olona vavanyo luqatha lweJWL & VIA lwevili.Amavili eRayone aqinisekisiwe iminyaka emithathu kwaye amkelwe ngabo bonke abathengisi bethu.
Ukuchaneka kufuna ukungaguquguquki kunye nokungaguquguquki kufuna ulawulo, yiyo loo nto iRayone ihlola ngobunono ivili ngalinye ngexesha lenyathelo ngalinye.Oomatshini beRayone benza uhlolo kwivili ngalinye ukuqinisekisa ukuchaneka ngaphambi kokudlulela kwinyathelo elilandelayo.Iqela lolawulo lomgangatho liqinisekisa yonke imilinganiselo ebalulekileyo ngokwezicwangciso zobunjineli obuneenkcukacha.Ukubaleka, umlinganiselo wokungqukuva kwevili elijikelezayo, ngowona mlinganiselo ubaluleke kakhulu.Amavili eRayone Racing akhangelwe ukuqinisekisa ukuba ukuphuma kungaphakathi kokunyamezelana.